ch 14 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 14 uphawu
14:1 Ke kaloku bekuza kubakho ipasika, izonka ezingenagwele, iintsuku ezimbini. Ke iinkokheli zababingeleli, kunye nababhali, babefuna indlela apho ukuze ngenkohliso ukumbamba, bambulale.
14:2 Kodwa bathi, "Hayi ngomkhosi, hleze mhlawumbi kusenokubakho ingxolo phakathi kwabantu. "
14:3 Yaye xa wayeneminyaka eBhetabhara, endlwini kaSimon owayeneqhenqa, yaye ehleli ukuba badle, kwafika umntu obhinqileyo eneqhaga lelitye lelabhastile container, linamafutha, enadusi engangxengelelweyo, exabiso. Kwaye wavula container lelabhastile, wawagalela phezu kwentloko yakhe.
14:4 Kwaye ke kukho abathile baba abacaphukayo phakathi kwabo baza bathi: "Yintoni na isizathu sokuba le nkcitho yamafutha aqholiweyo?
14:5 Ngokuba lo mafutha ngekuthengiswe iidenariyo ngaphezu kwamakhulu amathathu kuze kunikwe amahlwempu. "Yaye ke, bamrokrela kuye.
14:6 Kodwa uYesu wathi: "Ndivumele naye. Yintoni na isizathu ukuba inkathazo yakhe? Uye wenze into entle kum.
14:7 Ngokuba abampofu, onayo nawe usoloko. Yaye xa ufuna, uyakwazi ukwenza okulungileyo kubo. Kodwa awunayo kwam ngamaxesha onke.
14:8 Kodwa yena ukwenzile abenako. Yena ifikile kwangaphambili ukuba wawuthambisela ukungcwatywa umzimba wam ukungcwatywa.
14:9 Inene, ndithi kuni, zithe zavakaliswa khona ezi ndaba zilungileyo kulo lonke ihlabathi lonke, izinto ayenzileyo uya kuxelelwa, sisikhumbuzo ngaye. "
14:10 UYuda Sikariyoti, omnye kwabalishumi elinababini, waya kude, ukuba iinkokheli zababingeleli, ukuze amnikele kubo.
14:11 kwaye ke, akuva ukuba, zaye ndibavuyise. Kwaye ndamthembisa ukuba bamnike imali. Ke yena wafuna iindlela ithuba ngawo na ukumnikela.
14:12 Ke kaloku, ngowokuqala umhla wezonka ezingenagwele, xa immolate iPasika, abafundi bathi kuye, "Ufuna ukuba siye sikulungisele phi na ukuyidla ipasika?"
14:13 Kwaye wesusa bababini kubafundi bakhe,, Wathi ke yena kubo: "Hambani niye esixekweni. Kwaye uya nohlangatyezwa ngumntu ethwele umphanda wamanzi; ukumlandela.
14:14 Yaye naphi na apho athe wangena, nithi kumnini-ndlu, 'Uthi uMfundisi: Liphi na igumbi lam lokutyela, apho ndingadlela khona ipasika nabafundi bam?'
14:15 Kwayena wonibonisa cenacle enkulu, enazo. kwaye kukho, usenze yona. "
14:16 Bahamba ke abafundi bakhe, waya kungena kuwo umzi. Baza bakufumana kanye kunjengoko abekutshilo kubo. Bayilungisa ipasika.
14:17 ke, xa sekuhlwile, wafika ndawonye nabalishumi elinababini.
14:18 Kwaye lo gama besadla nokutya nabo etafileni, uYesu wathi, "Inene ndithi kuni, omnye kuni, lowo ke udla nam, nam, uya kundingcatsha. "
14:19 Kodwa Baqala ke ukuba buhlungu, nokuthi kuye, omnye ngexesha: "Ingaba ndim?"
14:20 Wathi ke yena kubo: "Ngomnye wabalishumi elinesibini, lowo ke uthi nkxu nam isandla esityeni.
14:21 yaye eneneni, UNyana woMntu uyemka, kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa kuye. Kodwa ke, yeha, loo mntu angcatshwa ngaye uNyana womntu uya kunikelwa. Bekuya kuba ngcono ukuba loo mntu ukuba wayengazange azalwe. "
14:22 Kwaye xa zisitya nabo, UYesu wathabatha isonka. Kwaye nayo, wasiqhekeza waza wabanika, wathi yena: "Thatha. Lo ngumzimba wam. "
14:23 Wazithabatha ke indebe, ubonga, kwakhe wabanika. Basela kuyo.
14:24 Wathi ke yena kubo: "Ligazi lam eli lomnqophiso omtsha, leyo aya eliphalala ngenxa yabaninzi.
14:25 Inene, ndithi kuni, ukuba akukho kuphinda kusela kwesi siqhamo somdiliya, kude kube yiloo mini ndiya kusela xa intsha ebukumkanini bukaThixo. "
14:26 Bakuba bevume ingoma, baphuma baya eNtabeni yemiNquma.
14:27 Wathi kubo uYesu: "Nina nonke niya kuwa kude kum ngobu busuku. Kuba kubhaliwe kwathiwa: 'Ndiza kumbetha umalusi, yaye izimvu ziya kuchithachithwa. '
14:28 Kodwa emva kokuvuka, Ndiya kunandulela, ndiye kwelaseGalili. "
14:29 Ke uPetros wathi kuye, "Nokuba bonke baya abaye kude kuwe, mna nakanye. "
14:30 Wathi kuye uYesu, "Inene ndithi kuni, ukuba olu suku, kwangobu busuku, ngaphambi kokuba umqhagi iye akhupha isandi bayo buphindwe kabini, uya kundikhanyela kathathu. "
14:31 Ke kaloku wathetha ngokubhekele, "Ndingafanelana ndimelwe kukuba ndife kunye nawe, Mna andingekhe ndikukhanyele. "Nabo bonke ke wathetha ngendlela efanayo nabo.
14:32 Kwaye ke waya kwilifa lizwe, igama Gethsemani. Wathi ke kubafundi bakhe, "Hlalani apha, ngoxa ndithandaza. "
14:33 Kwaye wathabatha uPetros, noYakobi, noYohane naye. Waza waqalisa ukoyika undidinisile.
14:34 Wathi ke yena kubo: "Umphefumlo wam ibuhlungu, kuze kube sekufeni. Hlala apha zivule amehlo. "
14:35 Ke kaloku, akubon 'ukuba sayihamba iindlela kancinane, Wawa ngobuso emhlabeni. Yaye wathandazela ukuba, ukuba bekunokwenzeka, ilixa elo lidlule kuye.
14:36 Wathi yena: "Abha, Utata, zonke izinto zinokwenzeka kuwe. Thabatha le ndebe kum. Kodwa makube, makungabi njengokuthanda kwam, kodwa wena. "
14:37 Wesuka waya ke lowo wabafumana belele. Wathi kuPetros: "Simon, ndilele? Ngaba akukwazi ukuba balwe ukuze iyure enye?
14:38 Lindani, ukuze ningangeni ekuhendweni. umoya okunene unentumekelelo, kodwa inyama ibuthathaka. "
14:39 Kwaye uya kude kwakhona, wathandaza, zwi.
14:40 Yaye abuyela, abafumane kodwa bebuye balala, (kuba amehlo abo ayenzima bubuthongo) kwaye abazange njani na ukuphendula kuye.
14:41 Kwaye wafika okwesihlandlo sesithathu, Wathi ke yena kubo: "Lalani ngoku, niphumle. Kwanele. Iyure ifikile. Khangela, uNyana womntu uza kunikelwa ezandleni zaboni.
14:42 Vuka, makhe sihambe. Khangela, lowo uya kundingcatsha bukufuphi. "
14:43 Ke kaloku esathetha, uYuda Sikariyoti, omnye kwabalishumi elinababini, befika, yaye kwakukho isihlwele esikhulu na, ninamakrele neentonga naye, ithunyelwe kwiinkokeli zababingeleli, kunye nababhali, nabadala.
14:44 Ke kaloku umngcatshi wakhe wayebanike umqondiso, bathi: "Yena lowo ndithe ndamanga, ke nguye. Kumbamba, naye uziqhube ngokuqaphela. "
14:45 Ke kaloku, akufika uSawule, ngoko nangoko ukusondela kuye, uthe: "Mawudunyiswe, Master!"Kwaye yena wamanga.
14:46 Kodwa babeka izandla phezu kwakhe, eyayimi.
14:47 Ngoko uthile kwabo babemi kufuphi, isixhobo sokuzoba ikrele, wamxabela umkhonzi wombingeleli omkhulu, wamnqamla indlebe yakhe.
14:48 Kwaye ephendula, UYesu wathi kubo: "Ukhe waphuma ukundibamba, nje ngokungathi ukuya kubamba, na, ninamakrele neentonga nje?
14:49 Daily, Mna nawe etempileni ndifundisa, yaye akuzange ubambelele kum. Kodwa ngale ndlela, azaliseke izibhalo. "
14:50 Ke abafundi bakhe, eshiya ngasemva, babalekile kude.
14:51 Ke kaloku, balandela indoda ethile leyo, singenanto kodwa ilinen ngelinen ecikizekileyo phezu ngokwakhe. Kwaye ke wayibamba.
14:52 kodwa yena, owala ilinen ecikizekileyo, babesindile, kanye kwabo ze.
14:53 Kwaye Bamsusa ngoko uYesu kumbingeleli omkhulu. Ke bonke ababingeleli kunye nababhali, kunye namadoda amakhulu ndawonye.
14:54 Ke kaloku uPetros wayemlandela, ebekele kude, wada waya ngaphakathi entendelezweni yendlu yombingeleli omkhulu. Waye ehleli phantsi ndawonye namadindala umlilo esotha.
14:55 kodwa ngokwenene, iinkokheli zababingeleli, nentlanganiso yamatyala iphelele, befuna ubungqina ngaye uYesu, ukuze amnikele ukufa, ayafumana nto.
14:56 Kuba babebaninzi wathetha ubungqina bobuxoki nxamnye naye, kodwa ubungqina babo bungayelelani.
14:57 Kanye nabantu abathile, nivuka, wanikela ubungqina bobuxoki nxamnye naye, bathi:
14:58 "Kuba samva yena esithi, 'Mna ndiya kuyichitha le tempile, eyenziwe ngezandla, ndize ngeentsuku ezintathu ndakhe enye, engenziwanga ngazandla. ' "
14:59 Kwaye ubungqina babo bungayelelani.
14:60 Ke umbingeleli omkhulu, esukuma phakathi kwabo, wambuza uYesu, bathi, "Ngaba akukho nto ekuphenduleni izinto ezifikayo kuwe yi aba?"
14:61 Kodwa yena cwaka waza wabanika akukho mpendulo. Kwakhona, umbingeleli omkhulu wambuza, wathi yena kuye, "Unguye na uKristu, uNyana kaThixo ungowokubongwa?"
14:62 Waza uYesu wathi kuye: "Ndingu. Kwaye niya kumbona uNyana woMntu, ehleli ngasekunene kwamandla kaThixo kunye ukufika namafu ezulu. "
14:63 Waza umbingeleli omkhulu, wawudiliza izambatho zakhe, wathi: "Kutheni thina ukuba amangqina?
14:64 Nikuvile ukunyelisa. Ingaba ivakala njani kuwe?"Kwaye bonke ukuba unetyala, njengoba necala ekufeni.
14:65 Yaqala inxenye ukumtshicela, nokumgqubuthela ubuso bakhe, ukuba atsho kuye ngamanqindi, yaye bathi kuye, "Profeta." Yaye abakhonzi wambetha ezintendeni zezandla zabo.
14:66 Ke kaloku, akubon 'ukuba uPetros enkundleni ngezantsi, omnye amaqadi wombingeleli omkhulu kufika.
14:67 Esotha xa wabona uPetros, yena ntsho kuye, kwaye wathi: "Nawe ubunaye uYesu waseNazarete."
14:68 Kodwa waphika, bathi, "Andiyazi, andiyiqondi kanye into kuwe besithi." Yaye waphuma phandle, phambi kwentendelezo; kunye yalila inkuku.
14:69 ke kwakhona, xa isicakakazi bambona, yena waqala wathi kwababemi, "Kuba oku ngomnye wabo."
14:70 Wakhanyela ke yena kwakhona. Kwaye emva kokuba okwethutyana, babuya abo babemi khona, bathi kuPetros: "Inyaniso, nawe ungomnye wabo. Yeyakho, kakhulu, ungowaseGalili. "
14:71 Waza waqala ukushwabula nokufunga, bathi, "Ngokuba andazi le ndoda, obaziyo wena uthetha. "
14:72 Kwaye ngoko nangoko yalila ke inkuku kwakhona. Walikhumbula ke uPetros ilizwi, abelithethile uYesu kuye, "Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye kabini, uya kundikhanyela kathathu. "Waza waqala walila.